Ikhaya elihle entliziyweni yeBournville
Sihlala kwindlu enkulu, ephucukileyo ngo-1910, enemigangatho emithathu, indlu evalelweyo. Ikwindawo entle enamagqabi iBournville, ikhaya lelali ethandekayo eluhlaza kunye neCadbury World. Ibala leCricket lase-Edgbaston, iSibhedlele sase-Q E kunye neYunivesithi yaseBirmingham zikufutshane kwaye iZiko leSixeko liyimizuzu eyi-17 ngololiwe (isikhululo esikuhambo lwemizuzu emi-5). Kukho iindlela zemijelo kunye neepaki ezikufutshane neenkundla zentenetya, iindawo zokudlala kunye nezinye izinto eziluncedo. I-Rowheath, ukuhamba kwemizuzu emi-3, inemisitho, ichibi elinoxolo, indawo yokudlala, ibha kunye necafe.
Ifakwe kwindawo ekhuselekileyo, indawo yokuhlala enobuhlobo nosapho enendawo yokupaka kwidrive yemoto enye kunye nendawo yokupaka eninzi endleleni.
Ikhitshi-Ikhitshi langoku elisebenza ngokupheleleyo elineoveni ephindwe kabini, iwaka lewatt microwave, induction kunye negesi hobs, iwasha / isomisi, idishwasher kunye nempompo yamanzi ashushu / abandayo ahluziweyo (akukho kettle) kunye nempompo yesiqhelo yasekhitshini. Sibonelela ngezinto zokunqunqa, izitya, iipani, izinto zokucoca njl.njl Yiya.gle Ekhaya Hub ukuba ufuna ukumamela umculo okanye ufuna naluphi na ulwalathiso/ulwazi.
Igumbi lokuhlambela losapho : (kwimigangatho yokuqala) enebhafu, i-cubicle yeshawa, indlu yangasese kunye nesitya esikhulu esineetawuli kunye nezinto ezibalulekileyo ezikhoyo (ingakumbi kubahambi ekufuneka behambe ukukhanya).
Indlu yangasese yesibini kunye negumbi lokuhlambela (umgangatho ophantsi kunye nezinto ezibalulekileyo).
Onke amagumbi okulala makhulu, anomoya, akhanyayo kwaye apetiwe kwaye aneebhedi zobukhulu boKumkani kwaye abonelelwe ngebhedi ecocekileyo / iitawuli zexesha elinye lokuhlala kuphela (umatshini wokuhlamba amanqaku obonelelwe ukuba ziindwendwe ezihlala ixesha elide), ukuxhoma kunye nokufumaneka kwendawo yeshelufu.
Igumbi lokulala eli-1-I-Eve Tempura umatrasi/imiqamelo entsha ebiza kakhulu, ifestile enkulu yokuma eBay, idesika, njl.
Igumbi lokulala eli-2 - umatrasi omtsha wamathambo.
Igumbi lokulala le-3 (Igumbi le-Attic kumgangatho ophezulu) - Idesika enkulu
Iindwendwe ezongezelelekileyo-Ungakwazi ukulala kwi-airbed ephindwe kabini, kunye/okanye kwisofa enkulu kakhulu kwiComfort Room kunye/okanye 3 x ii-lay-back recliners kwiMedia Room (KUFANELE sikwazi ukubonelela ngelinen yebhedi eyongezelelweyo ukulungiselela ukongeza. abantu)
Ibroadband yefayibha ekhawulezayo kakhulu kuyo yonke isantya sokukhuphela esingamakhulu amathathu namashumi amahlanu mb kunye namashumi amabini anesithathu sokulayisha nge-mesh wifi. Side sifumane indawo yokuhlala ekumgama we-50m!
.Igumbi leMedia (igumbi elingaphambili) Ine-55 entsha ye-Samsung QLED 4K TV kwingalo eshukumayo, i-Dolby Atmos 7 yesithethi se-cinema ejikeleza isandi se-TV/Mculo. UHD Apple TV & UHD Amazon Fire TV, Virgin Media full bundle (incl. Cinema/ Iitshaneli zezemidlalo kunye ne-BT Sport), ukufudumeza phantsi komgangatho ukongezelela kwi-radiator yegesi ephakathi. .
I-Comfort Room (Igumbi elingemva) nalo line-48 "I-Plasma 3D TV (kunye ne-4 pairs of reactive glasses [inokufuna ukutshaja]), Virgin Media full bundle (incl. Cinema/Sports and BT Sport channels), Vula uMlilo weGesi. Eli gumbi likhokelela ngaphandle ukuya kwi
I-Conservatory enkulu eGqwetyiweyo-Isofa yegadi kunye nezitulo ezi-2, itafile kunye nezitulo. Oku kukhokelela kwi
Ishawa/indlu yangasese ekumgangatho ophantsi-Kubonelelwe ngezinto ezibalulekileyo.
Igumbi lokutyela - (kufutshane nekhitshi kunye negumbi lokuthuthuzela. Itafile kunye nezitulo ezi-6.
Isitiya esingemva simalunga ne-60m ubude, kukho igadi yepatio esetiwe ngeparasol, izitulo (imiqamelo kwishedi) kunye nesihlalo esijingi se-2. Yindawo ehlala ingca, egrabileyo kwaye ehonjisiweyo enezityalo ezimisiweyo njl njl. Ikwabiyelwe ngokupheleleyo kwaye ubukhulu becala. yabucala kunye ilanga umgibe omkhulu.
Kukho iiDenon ezi-2 (i-Heos app elawulwayo) izithethi zebluetooth (ibhetri enye inamandla) ukunceda ukubonelela ngomculo naphi na endlini KUPHELA.
I-HDTV ene-izitishi zeTV eziqhelekileyo, I-Netflix, I-Apple TV, I-Amazon Prime Video
Isikhululo seenqwelomoya saseBirmingham siziikhilomitha ezili-9 kude kwaye siyakuthatha malunga nemizuzu engama-30 ngokuxhomekeke kwitrafikhi.
IZiko lesiXeko saseBirmingham likumgama oziikhilomitha ezi-5 kwaye malunga nemizuzu eli-15 yokuqhuba
ICadbury World kunye nelali yaseBournville zikude ngeemayile enye. I-Bournville enebala layo elihle eliluhlaza, iikhefi kunye nezakhiwo zembali, kubandakanya neMyuziyam yaseSelly Manor.
Indawo yokuthenga, iikhefi kunye nee-pubs 5/10 imizuzu yokuhamba.
Iivenkile ezininzi zengingqi.
Ininzi yokupaka endleleni nakwindlela yethu yokuqhuba.
Kukho indawo yokuzivocavoca imizuzu eyi-10 yokuhamba. Ukongeza kukho izibonelelo ezimangalisayo kwiYunivesithi, kubandakanywa ichibi lokuqubha ubungakanani be-olympic, i-squash kunye neenkundla ze-badminton kunye neeklasi eziqaqambileyo. Ndililungu kodwa unokuhlawula njengoko uhamba.
Zonke iipaki ezikule ngingqi zineendawo, ezinjengeenkundla zentenetya, iitafile zentenetya etafileni, iindawo zokudlala zabantwana, amachibi kunye nemijelo. Indlu kunye nomthi othandekayo obanzi owenziwe ngendlela ekhethekileyo. Siyayithanda le ndawo njengoko zininzi iindawo eziluhlaza kunye noyilo oluhle loyilo lwexesha. Kwakhona, kwaye kubaluleke kakhulu kuthi ukukwazi ukufikelela kuzo zonke izibonelelo esizifunayo ngokulula ngendlela, ibhasi okanye umzila. Ukuthenga kukhazimle, ukusuka kwiivenkile ezinkulu ukuya kwiimarike, ukuya kwiivenkile zabayili. Ukongeza naphi na apho sihlala khona kufuneka sibe nejimu elungileyo kwaye sinayo loo nto. Ukuba ukhetha ukuzilolonga ngaphandle, nazo zonke iipaki zikwenza kube kuhle ukubaleka okanye ukuhambahamba nje. Kukho iiklabhu ezibalekayo kunye neeklasi zepilates.
Ukuba neRowheath Park kunye nePavilion 3 imizuzu yokuhamba ibalasele njengoko intle. Ungaloba, ubukele amadada okanye uhlale ecaleni kwechibi elihle kakhulu kwaye linoxolo, okanye uye kuhlala kwicafe ejonge epakini, okanye ubukele abantwana bakho bedlala kwaye bonwabele iindawo ezininzi. Kukwakho neziganeko ezininzi ezenzekayo. Sihlala sithatha ipikiniki kwaye sithenge i-flat emhlophe kwi-cafe. Kukho ibha kunye neendawo zokuhlala ngaphandle. Ngaphezu koko, kukho i-bowling eluhlaza. Ngokuchasene nePavilion kukho amabala okudlala ibhola ekhatywayo kunye nombhoxo. Kukho iziganeko ezikhethekileyo ezahlukeneyo apha enyakeni.
Ibala leqakamba kunye nokunye okuluhlaza okubhowulayo kukwibala lokuDlala laseCadbury elingaphantsi kweemayile.
Sikwathanda ukungena kwindlela yomjelo e-Bournville kwaye sihambe ngeenyawo okanye sikhwele ibhayisekile singene kwiZiko leSixeko (iikhilomitha ezi-4.2). Kulula kwaye unokuzibona izikhephe zomjelo de ufike kwiSitrato saseGas Street. Le yokugqibela iphakathi kwebhokisi yemeyile kunye nendawo yaseBrindley nazo zonke iivenkile zayo, iibhari, iindawo zokutyela, iikhefi, iziko loLwandle loBomi, iCinema, iCube (ukhetho oluninzi lweendawo zokutyela / i-spa njl njl). Okanye vele ukhwele kuloliwe kwaye ufike apho malunga nemizuzu eyi-15.
IsiXeko saseBirmingham yindawo eselula edlamkileyo ephuhlayo ngalo lonke ixesha ingakumbi ekulungiseleleni imidlalo yeCommonwealth (kwaye ngethemba i-E-prix okwesihlandlo sokuqala) nazo zonke iindawo ezinomtsalane (iimyuziyam, iigadi zezityalo, umculo kunye neminyhadala yokutya, ngakumbi chwetheza imiboniso bhanyabhanya (yombane, imockiingbird) kunye neziqhelekileyo ezinkulu.Kukho ukufikelela lula kwiindawo ezininzi zomculo/zethiyetha (Genting/Barclaycard/O2/Symphony, Hippodrome etc), iindawo zenkcubeko ezifana neThala leencwadi elitsha leNyoni, Inqaku leMillennium njalo njalo. Edgbaston Cricket Ground (Uthuthu kunye nemidlalo emi-5 yendebe yehlabathi ka-2019) imalunga nokuhamba nge-20-30min okanye nge-45/47 ibhasi ukusuka e-Cotteridge (imizuzu emi-4). Imizuzu eyi-10 ngebhasi okanye kuLoliwe (KNN-UNI) Isibhedlele samathambo kukuhamba ngeenyawo umgama oyi-20min okanye ukhwele ibhasi ukuya eNorthfield.Uber's ziyafumaneka nakwindawo.
Recently married. Stay fit by walking everyday and going to gym at least 3 times a week. Work P/T in housing. Amenable and helpful. Love travelling whenever opportunity arises and usually travel abroad 3/4 times a year and also odd days away in UK.
Recently married. Stay fit by walking everyday and going to gym at least 3 times a week. Work P/T in housing. Amenable and helpful. Love travelling whenever opportunity arises and…
Siya kufumaneka ukuze sincede kwaye siphendule imibuzo ngexesha lokuhlala kwakho ngokobuqu okanye ngefowuni, i-imeyile njl. Ukuba ufuna ulwazi oluninzi okanye iimfuno ezithile ongaziboniyo zidweliswe apha sazise. Singanikezela ngeenkcukacha ezithe vetshe malunga nento ekhoyo ngaphakathi kwendawo...nceda ubuze nje :)
Iinkcukacha zazo ZONKE iindwendwe ezongezelelweyo ezingaphezulu kwe-6 kufuneka zicelwe PHAMBI koqinisekiso lokubhukisha.
Siya kufumaneka ukuze sincede kwaye siphendule imibuzo ngexesha lokuhlala kwakho ngokobuqu okanye ngefowuni, i-imeyile njl. Ukuba ufuna ulwazi oluninzi okanye iimfuno ezithile onga…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- West Midlands